အသက် ၅၀ ကျော်ရင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ | Santotoro
” အသက် ၅၀ ကျော်သူအများစုအတွက်မင်းတို့က ‘မင်းကအားစိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလဲ’ လို့သူတို့ကိုမေးရင် ‘အိုး၊ ကျောင်းကောတက္ကသိုလ်ကကောမဟုတ်ဘူး’ လို့သူတို့မေးတယ်။ အခုသူတို့ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်သမိုင်းမှတ်တိုင်ကိုရောက်ပြီ၊ သူတို့ကျန်းမာရေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အရင်ကထက်ပိုအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်” ဟု Hall Personal Training ကိုတည်ထောင်သူ Chris Hall ကပြောသည်။
ငါတို့အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုငါတို့အားလုံးသိသည်။ လိင်ဟော်မုန်းများကျဆင်းလာခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီတိုးလာခြင်း၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့် ‘လူလတ်ပိုင်းပြန့်နှံ့မှု’ သို့ ဦး တည်သွားသောကြွက်သားများကိုဖြုန်းတီးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကမှန်ထဲမှာမင်းမြင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဘောင်းဘီရှည်ဘယ်လောက်တင်းကျပ်နေတာလဲ။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုရှိခြင်းသည်သင့်နှလုံး၊ အရိုးများ၊ သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
“ ခုခံအားကိုအခြေခံသည့်လေ့ကျင့်မှု (စွမ်းအားကိုတည်ဆောက်စေသောမည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းမဆို) သည်အသက် ၅၀ ကျော်သူတစ် ဦး အတွက်အရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်စေကြောင်းပြသသောကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးရှိသည်” ။
“ ဒါကမသာပေမယ့်ငါတို့ကြွက်သားတွေကိုသုံးပြီးသူတို့ကိုမကြာခဏအခွန်ကောက်မယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားတစ်သျှူးအလဟ tissue ဖြစ်မှုနှုန်းကိုနှေးကွေးစေပြီးတစ်သျှူးအသစ်ကိုပင်စတင်တည်ဆောက်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း၊ ကျန်းမာသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်လည်းဖြစ်သည်။
သင်အငြိမ်းစားယူပြီးအသက်မပြည့်ခင်တခါကအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတယ်၊ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့အဆင့်ကဘဝနောက်ပိုင်းမှာရေတံခွန်တွေကိုတားဆီးပေးနိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၆၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ပါကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်္ဂလန် (PHE) ကသင်၏အဓိကကြွက်သားအုပ်စုအားလုံးအားတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ရက်အနည်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်ခွန်အားလေ့ကျင့်ရန်အကြံပြုသည်။ အုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်ခန်း၏ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုသည်အထီးကျန်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်၏အလုပ်ခွင်နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်လူမှုရေးအထောက်အကူပြုကွန်ယက်တစ်ခုပေးနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အားလုံးကောင်းကောင်းသိပါတယ် အဘယ်ကြောင့် သင်ပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်သင့်သည်၊ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်ထိုနေရာမှမည်သို့ထွက်သွားပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်သနည်း။ ဦး စွာ၊ သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားရန်ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာလှုပ်ရှားမှုမရှိသောအခါစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပုံရသော်လည်းမလိုအပ်ပါ။ သော့ကနှေးကွေးစွာစတင်နေပြီး၊ သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးမယ့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်။
“ သင်ထွက်ပြီးချက်ချင်းမာရသွန်ပြေးရန်မလိုပါ!” ရှက်ဖီးအခြေစိုက်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းဆရာ Lucy Locket ကပြောကြားသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ရေကူးခြင်းများကိုပါပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သည့်အရာသည်သင်၏ဘ ၀ ၌အားဖြည့်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊ အေရိုးဗစ်နှင့်ဟန်ချက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
Chris သည်တစ်ပတ်လျှင်မိနစ် ၃၀ မှ ၂ နာရီမှ ၃ မိနစ်အထိလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအတူတကွစတင်ရန်နှင့်တူညီသောကြာချိန်၏လေးပတ်မှငါးကြိမ်အထိစတင်ရန်အကြံပြုသည်။ သူက“ သင်လေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အကြိမ်ရေဟာသင်စတင်ချိန်မှာကြာချိန်ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။ သင့်ခန္တာကိုယ်၌သည်းခံနိုင်စွမ်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းကိုသင်ပိုမိုသတိပြုမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပိုမိုတိုးတက်လာပြီးသင်၏အပတ်စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်လေ့ကျင့်ခန်းများထပ်မံထည့်နိုင်သည်။
အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ်ဖရန့်အီဗန်စ်ကသူမ၏ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာခရီးကိုတိုင်တန်းခဲ့သည်။ “ ကျောက်တုံးတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားပြီ၊ အခုငါ ၅ ကီလိုပြေး၊ ခြေထောက်စာနယ်ဇင်း ၄၂၂ ကီလိုဂရမ်နဲ့ငါ့ဒေသတွင်းအားကစားရုံမှာတစ်ပတ်ကိုစာသင်ခန်းများစွာသွားတယ်” ဟုသူကဆိုသည်။
ဖရန်စစ်ကကျွန်ုပ်ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အားကစားနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုပြည့်ဝသည်။ အားကစားရုံမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ အနားယူနေသည့်သွေးခုန်နှုန်းကောင်းခြင်းနှင့်ယခုခေတ်တွင်အတန်းများတွင်ပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းထက် လူငယ်တွေ! ငါတောက်ပတယ်၊ ထောက်ခံမှုနဲ့အများကြီးပြီးမြောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ “
Fran အတွက်သူမ၏အားကစားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်သည်သူမ၏လေ့ကျင့်ရေးစနစ်နှင့်၎င်းကိုစတင်ခဲ့သည် 5K အစီအစဉ်ကိုလက်ဆွဲပါ ရုံလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကပြေးသို့သူမ၏တယ်။ သူမသည်လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသရေးစိတ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ Run Every Day (R.E.D. ) ဇန်နဝါရီတွင်ပါ ၀ င်နေပြီးယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်သူမ၏အားကစားခန်းမမှအမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ Tough Mudder ကိုပြုလုပ်ရန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
“ ကျနော့်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကဒါကိုလုပ်ဖို့ပဲ” ဟုသူမကဆိုသည်။ “ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါ၊ သင်ရှာတွေ့တာနဲ့လုပ်တာကိုလုပ်ပါ၊ မကြောက်နဲ့၊ မင်းရဲ့အသက်ဟာစာသားသက်သက်သာသာဖြစ်တယ်။ ။ “
သင်သည်ဒေသတွင်းအားကစားရုံအချို့ကိုသင်တက်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ စက်ဘီးစီးခြင်းကိုနှစ်သက်သောကလေးဘဝကိုပြန်လည်ရှာဖွေလိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသတိပြုမိရန်နှင့်သင်၏ပန်းတိုင်များသို့ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်တည်ဆောက်ရန်သတိရပါ။
“ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုမှမစတင်ပါနှင့်။ လေ့ကျင့်ခန်းကသင့်အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်ဖြည်းဖြည်းချင်း ၀ င်ပါ။ အလွန်အကျွံမလုပ်ပါနဲ့။ သင်နှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအရာတစ်ခုမှစတင်စမ်းပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေးအတန်း၊ ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လေ့ကျင့်မယ် “ ဟုလူစီကအကြံပြုသည်။ သူမကထပ်မံပြောကြားသည်မှာ – “ မင်းဘယ်သူ့ကိုမှမကြည့်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့အမှားလုပ်နေတာကိုသူတို့အရမ်းစိုးရိမ်နေကြတယ်။ “
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်သွင်းထားခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုမမေ့ပါနှင့်။ “ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အကြားပြန်လည်နာလန်ထူလာအောင်ကူညီနိုင်ဖို့နဲ့ကြွက်သားပမာဏလျော့နည်းစေဖို့သက်ကြီးရွယ်အိုများဟာပုံမှန်အားဖြင့်လူငယ်များထက်ပရိုတင်းပိုလိုအပ်ပါတယ်။ ကြက်သား၊ ငါး၊ ပဲနှင့်ပဲများကဲ့သို့ပါးလွှာသောပရိုတင်းကိုအလေးပေးသောမျှတသောအစားအစာကိုရည်ရွယ်ပြီးသင့်ကိုရေဓါတ်ပြည့်စေရန်ရေများများစားစားသေချာပါစေ။
အသက်အရွယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ရည်ရွယ်၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းများသင်ကြားပေးပါသည်။ ဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။